Airbus inozivisa yayo yekutanga eco-bapiro prototype
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Airbus inozivisa yayo yekutanga eco-bapiro prototype
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Wing of Tomorrow, chikamu-chakabhadharwa neUK's Aerospace Technology Institute, chirongwa chakazara chenyika yose cheAirbus chinosanganisira vanobatana nenyika pamwe nezvikwata munzvimbo dzeAirbus dzekuEurope, kusanganisira Bremen kuGerman, uko timu ye'Wing Moveables 'yakavakirwa. Varatidziri vemapapiro vatatu vanounza pamwechete anopfuura zana matekinoroji matsva ekutsvaga matekinoroji matsva ekugadzira uye egungano nechinangwa chekuita kuti ndege ibudirire.
'Wing of Tomorrow' inosvika pachinhanho chakakosha pamwe nekuungana kwayo kwekutanga yakazara-saizi bapiro prototype.
Chirongwa chitsva cheAirbusus chichawedzera kunzwisiswa kwekugadzirwa kwemapapiro nemaindasitiri.
Mapapiro matatu akazara-akaenzana mapapiro anozogadzirwa akazara pasi pechirongwa che'Wing of Tomorrow '.
'Wing of Tomorrow', chirongwa chikuru cheAirbus yekutsvagisa uye tekinoroji, chasvika pachinhanho chakakosha neungano yekutanga-izere mapapiro prototype.
Chirongwa cheWing of Tomorrow hachizongoedza zvigadzirwa zvemazuva ano uye matekinoroji matsva muaerodynamics uye mapurani emapapiro asi, zvakakosha, kuongorora kuti kugadzirwa kwemapapiro nemaindasitiri zvingavandudzwe sei kuzadzikisa kudiwa kweramangwana sezvo chikamu chinobuda kubva mudenda.
Mapapiro matatu akazara-saizi mapapiro achagadzirwa muhuwandu: imwe ichashandiswa kunzwisisa masystem ekubatanidzwa; sekondi ichaedzwa zvine mutsindo kuti ienzaniswe necomputer modelling, nepo chechitatu chichaunganidzwa kuyedza kuwedzera-kugadzirwa uye kuenzanisa nemhando dzemabhizimusi.
Sabine Klauke, Airbus Chief technical Officer, akati: "Mapapiro eMangwana, chikamu chakakosha cheiyo Airbus 'R&T portfolio, ichatibatsira kuongorora kugona kwemaindasitiri ekugadzira mapapiro emangwana. Yepamusoro-inoshanda mapapiro tekinoroji ndeimwe yemhinduro dzinoverengeka - padhuze neyakagadzika ndege yekufambisa uye hydrogen - isu tinokwanisa kuitisa kuti tibatsire mukubhururuka kwekusimudzira dhivhoni. Wing of Tomorrow is also a example of how large-great industry partnership will be important to Kuzadzikisa chikamu chedu chekambani remangwana rakanaka. ”
Wing of Tomorrow, chikamu-chakabhadharwa neUK's Aerospace Technology Institute, chirongwa chakazara chenyika yose yeAirbus inosanganisira vanobatana nenyika uye zvikwata munzvimbo dzeAirbus 'dzeEurope, kusanganisira Bremen kuGerman, uko iko 'Wing Moveables' timu yakavakirwa. Varatidziri vemapapiro vatatu vanounza pamwechete anopfuura zana matekinoroji matsva ekutsvaga matekinoroji matsva ekugadzira uye egungano nechinangwa chekuita kuti ndege ibudirire.
Sub-Assembly yeakaomeswa mapapiro chifukidzo yakaitika panzvimbo yeAirbus 'Filton, England, ichigadzirwa kuNational Composite Center muBristol. Chakafukidza mapapiro uye chikamu chikuru kubva kuGKN Aerospace - iyo Fixed Trailing Edge - yakaendeswa kune Advanced Kugadzira Yekutsvagisa Center, Wales, nzvimbo iri paAirbus 'bapiro-inogadzira chirimwa muBroughton, Flintshire, kuti musangano utange.